ရျောနယျဒိုရဲ့ စံခြိနျတှထေဲကတဈခုကို ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တဲ့ လူကာကူ – Premier League Special
၂၀၂၁ခုနှဈဟာ အံသွစရာတှနေဲ့ ကွိုဆိုနတေဲ့နှဈသဈတဈခုလား…? ပွက်ခဒိနျနှဈတှပွေောငျးလဲခဲ့ကွခြိနျမှာ အတျောကိုကွာမွငျ့နတေဲ့စံခြိနျတှဟော မပွောငျးမလဲတညျရှိနခေဲ့ကွပမေယျ့ ဒီနှဈသဈမှာတော့ တဈခြို့သော စံခြိနျတှဟော ကြိုးပကျြလာခဲ့ပါပွီ။ တဈခြိနျကစီးရီးအရေဲ့ ဂိုးသှငျးသူရဲကောငျးဖွဈခဲ့တဲ့ ရျောနယျဒို လူဝဈ နာဇာရီအိုက အငျတာမီလနျအသငျးမှာ စံခြိနျတငျထားခဲ့တဲ့ ပှဲအနဲဆုံးနဲ့ သှငျးဂိုး (၅၀)ပွညျ့ စံခြိနျတဈခုကတော့ ၂၀၂၁ရဲ့ နှဈအစမှာတငျ ခြိုးဖကျြခံခဲ့ရပါပွီ။
သူ့ရဲ့စံခြိနျကိုခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့တဲ့သူကတော့ ယူနိုကျတကျမှာ ခွစှေမျးသိပျမပွနိုငျဘဲ အသငျးပွောငျးရှသှေ့ားခဲ့တဲ့ အငျတာမီလနျ အသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှူး လူကာကူ ဖွဈပါတယျ။
သူဟာ အခုဆိုရငျ ဂိုးတှပေိုသှငျးပွီး မှတျတမျးကောငျး ရရှိနပေါပွီ။ ခရိုတုနျးအသငျးကို အနိုငျရတဲ့ စီးရီးအေ ပှဲစဉျမှာ လူကာကူတဈယောကျ ဂိုးသှငျးယူခဲ့ပွီးနောကျ အငျတာမီလနျအသငျးရဲ့ ထိပျတနျးတိုကျစဈမှူးဟောငျး ရျောနယျဒို (ဘရာဇီး) ရဲ့စံခြိနျကို ခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
အငျတာမီလနျ အသငျးဟာ ခရိုတုနျး အသငျးနဲ့ ကစားတဲ့ ပှဲမှာ လောတရိုမာတီးနကျဈ က(၃)ဂိုး၊ လူကာကူ၊ ဟာကီမီ တို့က တဈဂိုးစီနဲ့ ခရိုတုနျး အသငျးက မာရိုနီ က ကိုယျ့ဂိုးကိုယျသှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ (၆)ဂိုး-(၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တိုကျစဈမှူး လူကာကူ ဟာအဲ ဒီပှဲမှာ ဂိုးသှငျးယူပွီးနောကျ အငျတာမီလနျ အသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ပှဲအရအေတှကျနညျးနညျးနဲ့ အမွနျဆုံးသှငျးဂိုး(၅၀)ပွညျ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ ရျောနယျဒို(ဘရာဇီး) ရဲ့စံခြိနျ ပှဲအရအေတှကျ(၇၇)၊သှငျးဂိုး(၅၀)ကို ခြိုးဖကျြပွီး စံခြိနျသဈတငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဘယျလျဂြီယံ ကစားသမားလူကာကူ ဟာ အငျတာမီလနျ အသငျးအတှကျ ပှဲ(၇၀)ကစားအပွီးမှာ အခုလို သှငျးဂိုး(၅၀)ပွညျ့မွောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ လူကာကူ ဟာ ခရိုတုနျးနဲ့ ပှဲမှာ ပါဝငျကစားခဲ့ပွီးနောကျ စီးရီးအေ ပှဲစဉျ(၅၀)ပွညျ့သှားခဲ့သလို စံခြိနျအသဈလညျး ရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဘယျလျဂြီယံ ကစားသမားဟာ အခုရာသီ စီးရီးအေ ပွိုငျပှဲမှာလညျး (၁၂)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး ‌စီရျောနယျဒို ရဲ့နောကျ ဒုတိယဂိုးအမြား‌ဆုံးသှငျးသူအဖွဈရပျတညျနပေါတယျ။
သမိုငျးတဈလြောကျ စီးရီးအေ ပထမပှဲ ၅၀အတှငျး ဂိုးအမြားဆုံး သှငျးထားသူမြားစာရငျးမှာတော့ လူကာကူက နံပါတျ ၆ နရောမှာရှိပါတယျ။ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျဒို – ၄၀ ဂိုး၊ ရျောနယျဒို(ဘရာဇီး) – ၃၈ ဂိုး၊ ရှကျဗျခငျြကို – ၃၇ ဂိုး၊ မီလီတို – ၃၇ ဂိုး၊ မှနျတဲလား – ၃၆ ဂိုး၊ လူကာကူ – ၃၅ ဂိုးတို့ဖွဈပါတယျ။
လူကာကူက သူ့ကိုယျသူ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးတိုကျစဈမှူး(၅)ဦးထဲမှာ ပါဝငျတယျဆိုပွီးတော့လညျး ယုံကွညျထားပါတယျ။ “ကြှနျတေျာ့ရဲ့ နညျးစနဈပိုငျး၊ နရောယူပုံနဲ့ ရှလြေ့ားပုံတှကေ အဲဒီကိစ်စကိုသကျသပွေနပေါတယျ။ ကြှနျတျောက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး တိုကျစဈမှူး(၅)ဦးထဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို၊ မကျဆီနဲ့ လီဝနျဒေါစကီး တို့ စှမျးဆောငျနိုငျသလို ကြှနျတျောလညျး ဘာကွောငျ့ မလုပျနိုငျရမှာလဲ”ဆိုပွီး ပွောဖူးပါတယျ။
အငျတာမီလနျ အသငျးဟာ အခုနှဈရာသီ စီးရီးအပွေိုငျပှဲမှာ ထိပျဆုံးနရောက မွို့ခံပွိုငျဘကျ အစေီမီလနျ အသငျးနဲ့ (၁)မှတျအကှာ ဒုတိယနရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။အငျတာမီလနျ အသငျးဟာ ကွားရကျမှာ ဆမျဒိုးရီးယားအသငျးနဲ့ စီးရီးအေ ပှဲစဉျယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ရော်နယ်ဒိုရဲ့ စံချိန်တွေထဲကတစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လူကာကူ
၂၀၂၁ခုနှစ်ဟာ အံသြစရာတွေနဲ့ ကြိုဆိုနေတဲ့နှစ်သစ်တစ်ခုလား…? ပြက္ခဒိန်နှစ်တွေပြောင်းလဲခဲ့ကြချိန်မှာ အတော်ကိုကြာမြင့်နေတဲ့စံချိန်တွေဟာ မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေခဲ့ကြပေမယ့် ဒီနှစ်သစ်မှာတော့ တစ်ချို့သော စံချိန်တွေဟာ ကျိုးပျက်လာခဲ့ပါပြီ။ တစ်ချိန်ကစီးရီးအေရဲ့ ဂိုးသွင်းသူရဲကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒို လူဝစ် နာဇာရီအိုက အင်တာမီလန်အသင်းမှာ စံချိန်တင်ထားခဲ့တဲ့ ပွဲအနဲဆုံးနဲ့ သွင်းဂိုး (၅၀)ပြည့် စံချိန်တစ်ခုကတော့ ၂၀၂၁ရဲ့ နှစ်အစမှာတင် ချိုးဖျက်ခံခဲ့ရပါပြီ။ သူ့ရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ ယူနိုက်တက်မှာ ခြေစွမ်းသိပ်မပြနိုင်ဘဲ အသင်းပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ အင်တာမီလန် အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အခုဆိုရင် ဂိုးတွေပိုသွင်းပြီး မှတ်တမ်းကောင်း ရရှိနေပါပြီ။ ခရိုတုန်းအသင်းကို အနိုင်ရတဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ်မှာ လူကာကူတစ်ယောက် ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးနောက် အင်တာမီလန်အသင်းရဲ့ ထိပ်တန်းတိုက်စစ်မှူးဟောင်း ရော်နယ်ဒို (ဘရာဇီး) ရဲ့စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ခရိုတုန်း အသင်းနဲ့ ကစားတဲ့ ပွဲမှာ လောတရိုမာတီးနက်စ် က(၃)ဂိုး၊ လူကာကူ၊ ဟာကီမီ တို့က တစ်ဂိုးစီနဲ့ ခရိုတုန်း အသင်းက မာရိုနီ က ကိုယ့်ဂိုးကိုယ်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့် (၆)ဂိုး-(၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်စစ်မှူး လူကာကူ ဟာအဲ ဒီပွဲမှာ ဂိုးသွင်းယူပြီးနောက် အင်တာမီလန် အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ပွဲအရေအတွက်နည်းနည်းနဲ့ အမြန်ဆုံးသွင်းဂိုး(၅၀)ပြည့်တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် ရော်နယ်ဒို(ဘရာဇီး) ရဲ့စံချိန် ပွဲအရေအတွက်(၇၇)၊သွင်းဂိုး(၅၀)ကို ချိုးဖျက်ပြီး စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ကစားသမားလူကာကူ ဟာ အင်တာမီလန် အသင်းအတွက် ပွဲ(၇၀)ကစားအပြီးမှာ အခုလို သွင်းဂိုး(၅၀)ပြည့်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူကာကူ ဟာ ခရိုတုန်းနဲ့ ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားခဲ့ပြီးနောက် စီးရီးအေ ပွဲစဉ်(၅၀)ပြည့်သွားခဲ့သလို စံချိန်အသစ်လည်း ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လ်ဂျီယံ ကစားသမားဟာ အခုရာသီ စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲမှာလည်း (၁၂)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး ‌စီရော်နယ်ဒို ရဲ့နောက် ဒုတိယဂိုးအများ‌ဆုံးသွင်းသူအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။ သမိုင်းတစ်လျောက် စီးရီးအေ ပထမပွဲ ၅၀အတွင်း ဂိုးအများဆုံး သွင်းထားသူများစာရင်းမှာတော့ လူကာကူက နံပါတ် ၆ နေရာမှာရှိပါတယ်။ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို – ၄၀ ဂိုး၊ ရော်နယ်ဒို(ဘရာဇီး) – ၃၈ ဂိုး၊ ရှက်ဗ်ချင်ကို – ၃၇ ဂိုး၊ မီလီတို – ၃၇ ဂိုး၊ မွန်တဲလား – ၃၆ ဂိုး၊ လူကာကူ – ၃၅ ဂိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူကာကူက သူ့ကိုယ်သူ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှူး(၅)ဦးထဲမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်း ယုံကြည်ထားပါတယ်။ “ကျွန်တော့်ရဲ့ နည်းစနစ်ပိုင်း၊ နေရာယူပုံနဲ့ ရွေ့လျားပုံတွေက အဲဒီကိစ္စကိုသက်သေပြနေပါတယ်။ ကျွန်တော်က ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တိုက်စစ်မှူး(၅)ဦးထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ မက်ဆီနဲ့ လီဝန်ဒေါစကီး တို့ စွမ်းဆောင်နိုင်သလို ကျွန်တော်လည်း ဘာကြောင့် မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ”ဆိုပြီး ပြောဖူးပါတယ်။ အင်တာမီလန် အသင်းဟာ အခုနှစ်ရာသီ စီးရီးအေပြိုင်ပွဲမှာ ထိပ်ဆုံးနေရာက မြို့ခံပြိုင်ဘက် အေစီမီလန် အသင်းနဲ့ (၁)မှတ်အကွာ ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။အင်တာမီလန် အသင်းဟာ ကြားရက်မှာ ဆမ်ဒိုးရီးယားအသင်းနဲ့ စီးရီးအေ ပွဲစဉ်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။